Otu esi eji nchịkọta njem ndị ahịa iji bulie mbọ ahịa ị na -achọ n'ọgbọ | Martech Zone
Ka ebuli gị elu chọrọ ọgbọ Mgbalị ịre ahịa nke ọma, ị ga -achọ ọhụhụ ụzọ ọ bụla nke njem ndị ahịa gị na ụzọ iji soro ma nyochaa data ha iji ghọta ihe na -akpali ha ugbu a na ọdịnihu. Kedu otu esi eme nke ahụ? Ọ dabara nke ọma, nyocha njem ndị ahịa na -enye nghọta bara uru n'ime usoro omume na mmasị ndị ọbịa gị n'oge njem ndị ahịa ha niile. Nghọta ndị a na -enye gị ohere ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa etinyere nke na -akpali ndị ọbịa ka ha rute ebe njedebe n'ime oghere ahịa gị.
Kedu ihe bụ nyocha njem ndị ahịa, oleekwa otu ị ga -esi jiri ya bulie atụmatụ azụmaahịa ọgbọ ọgbọ gị? Ka anyị chọpụta.
Kedu ihe nyocha njem ndị ahịa?
Nchịkọta njem ndị ahịa bụ ngwa na -enyocha n'ụzọ doro anya njem ndị ahịa. Ngwa a gụnyere nsuso na inyocha otu ndị ahịa gị si eji ọwa dị iche iche emekọrịta ihe na ika gị. Ọ na -enyocha ọwa niile - ejiri ugbu a na ọdịnihu - nke ndị ahịa gị metụrụ ozugbo.
Ọwa ndị a nwere ike ịgụnye:
Ọwa nwere mmekọrịta mmadụ na ibe ya, dị ka ebe a na -akpọ oku
Ọwa mmekọrịta abụọ, dị ka mgbasa ozi ngosi
Ọwa na -akpaghị aka, dị ka ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ weebụsaịtị
Ọwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ, dị ka ụlọ ahịa na-ere ahịa nọọrọ onwe ha
Ọwa na -enye aka ndị ahịa dị ndụ, dị ka igodo saịtị njikọ ma ọ bụ nkata ndụ
Kedu ihe kpatara m ji achọ nyocha njem ndị ahịa?
Ọbụlagodi njem ndị ahịa na -esiwanye ike, ndị ahịa taa na -atụ anya na mmekọrịta azụmahịa ha na ika gị - gafee ọtụtụ ọwa - ka ya na ndị isi CX dị ka Amazon na Google. Ọ bụrụ na njem ndị ahịa gị enweghị nke ọ bụla n'uzọ ọ bụla, ha agaghị enwe afọ ojuju wee gakwuru onye asọmpi. N'aka nke ọzọ, ọmụmụ na -egosi nke ahụ ahụmịhe ndị ahịa dị mma kpata mmụba ego.
Nnyocha na -egosikwa na itinye ego na njikwa nzaghachi ndị ahịa ezughị iji melite ọkwa CX gị. Ihe kpatara ọdịda a bụ eziokwu na a na -arịọkarị nzaghachi na isi ihe dị na njem ahụ. O di nwute, nke a pụtara na ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime njem ndị ahịa ka ejidere, na -akọwahie ahụmịhe ndị ahịa gị niile.
Data a ezughị ezu na -ebelata ikike ị nweta onyonyo zuru oke na nghọta ziri ezi na arụmọrụ atụmatụ ahịa gị. Ọ na -ahapụkwa gị na mwepu maka ịkwalite ahụmịhe ndị ahịa yana ijikọ ahụmịhe ndị ahịa na nsonaazụ azụmaahịa a na -ahụ anya.
Nchịkọta njem ndị ahịa bụ njikọ dị n'etiti akparamagwa ndị ahịa gị na nsonaazụ azụmahịa gị. Mmemme nyocha njem ndị ahịa na -enyere azụmahịa gị aka soro, tụọ ma melite ahụmịhe ndị ahịa n'ofe ọtụtụ mmetụ na oge, gụnyere njem ndị ahịa niile.
Ịtụle nyocha njem ndị ahịa na -enyere ndị isi ahịa ahịa aka ịza ajụjụ dị mgbagwoju anya, dịka:
Kedu ihe na -ebute agwa ndị ahịa anyị?
Mmekọrịta ma ọ bụ njem ndị gara aga ka ndị ahịa anyị mere nke dugara ha ebe a?
Kedu ụzọ ndị ahịa anyị si aga njem ha?
Kedu ihe ga -esi na ya pụta maka onye ahịa ma ọ bụ njem ọ bụla?
Kedu ka njem na nsonaazụ ndị a ga -esi metụta nsonaazụ azụmahịa anyị?
Gịnị bụ ebumnuche ndị ahịa anyị?
Kedu ka ebumnuche ha si kwekọọ na ebumnuche azụmahịa anyị?
Kedu otu anyị ga -esi tinye uru maka onye ahịa ọ bụla ma kwalite ahụmịhe ndị ahịa ha?
Kedu uru nke nchịkọta njem ndị ahịa?
Nchịkọta njem ndị ahịa bụ ihe dị mkpa na mmemme njikwa njem ndị ahịa dị irè. Ọ bụ akụkụ ahụ na -enyocha data zuru oke ma na -ewepụta nghọta arụ ọrụ. Nghọta ndị enwetara n'ụdị mmemme njikwa ndị ahịa bara uru maka ma ndị ahịa ma ndị azụmaahịa. Nke a bụ otu.
Ahụmịhe ndị ahịa kachasị nke ọma (CX) - Nghọta ndị enwetara site na nyocha dị irè nke njem ndị ahịa gị na -enyere gị aka ịkwalite ọkwa ọ bụla n'ụzọ maka ahụmịhe n'ozuzu enweghị nkebi.
Nsonaazụ arụmọrụ na -aga n'ihu na -aga n'ihu - Na mgbakwunye, nyocha na -aga n'ihu na -enye gị ohere ịlele arụmọrụ nke atụmatụ ahịa ọgbọ na -achọ n'ọtụtụ ọwa ma kọwaa KPI kwesịrị ekwesị iji tụọ njem ọ bụla.
Nyocha data site na ọtụtụ ọwa na mpaghara oge - Mgbe ị lere anya njem ndị ahịa n'ofe ọtụtụ ọwa na usoro oge, ezigbo ihe mgbu ga -apụta ìhè. Ịmata isi ihe mgbu ndị a na -enyere gị aka ịme ihe ma metụta njem ndị ahịa gị nke ọma.
Kedu otu m ga -esi bulite nchịkọta njem ndị ahịa? - Ndị isi na ọrụ ndị ahịa, nyocha, ịzụ ahịa na CX na -emekarị nyocha njem ndị ahịa. Ndị isi a na -anabata nyiwe nyocha njem ndị ahịa iji meziwanye usoro ahịa ahịa ọgbọ ha na ikike nha arụmọrụ.
Ndị otu a na -ebuli nchịkọta njem ndị ahịa ka:
Amass data njem ndị ahịa
Dozie njirimara ndị ahịa ọtụtụ ọwa
Nyochaa mmekọrịta na-enweghị atụ na njem njem ọwa a na-apụghị ịgụta ọnụ
Chọpụta ebe mgbu CX na ihe kpatara ha
Nyochaa nkwalite njem ndị ahịa nwere ike ime
Chọpụta ego nkwụnye ego CX 'ROI
Maapụ Njem Ndị Ahịa vs. Nchịkọta Njem Ndị Ahịa
Dị ka onye na -achọ ahịa na -achọ ihe, ị nwere ike tinye n'ọrụ ahịa njem nkewa ma chee na ọ na -enye otu nghọta dị ka nyocha njem ndị ahịa. N'ụzọ dị mwute, nke a abụghị ikpe. Ọ bụ ezie na eserese nke njem na -elekwasị anya na nghọta dị mma, nyocha njem ndị ahịa na -ebuwanye ibu ma na -etinye oke nke ukwuu.
Static Snapshots vs. Nkọwa na -aga n'ihu - Maapụ njem na -enye naanị nseta ihu nke ụfọdụ n'ime njem ndị ahịa gị na enweghị nkọwa achọrọ iji gosipụta ọtụtụ ndị ahịa gị na akparamagwa ha pụrụ iche.
Static vs. Data Dabere na Oge -Data dabere na oge na-eduzi nyocha njem ndị ahịa, na-enye gị ohere ịhụ ka njem ndị ahịa si agbanwe ka oge na-aga. Ikike ịlele njem ndị ahịa nwere ọtụtụ ọwa na ebe mmetụ aka na njem na-enyere ndị ahịa aka ịkọ ihe ịga nke ọma njem ndị ahịa.
Nnwale na mperi vs. Nnwale oge -Enweghị visibiliti maka data ọhụrụ na mmekọrịta ọ bụla na njem ndị ahịa, a na-ahapụ ụlọ ọrụ ịnwale nkwalite ọhụụ na njem ndị ahịa niile. Ọbụghị naanị na nke a nwere ike imebi oge na akụrụngwa, ọ pụtara na ndị na -ere ahịa ga -echere nsonaazụ agwakọtara nke na -amataghị ebe nsogbu dị.
Nchịkọta njem ndị ahịa na -enye ndị na -ere ahịa ihe ngosi iji hụ ka ndị ahịa si emeghachi omume maka mmelite tinyere ọtụtụ mmetụ na oge. Tụkwasị na nke a, ngwa a na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịnwale ma soro ihe ịga nke ọma nke nkwalite mmekorita ahụmịhe ndị ahịa n'otu oge.
Kwadoro site n'ịmụ igwe na AI, nyocha njem ndị ahịa na -enyere ndị ahịa aka ịchọpụta isi ihe mgbu na njem ndị ahịa niile na -emetụta CX n'ụzọ na -adịghị mma. Nghọta ndị a na-enye ohere ka azụmahịa azụmaahịa na-ebute ụzọ ohere maka njikarịcha njem ndị ahịa yana na -ebute uto ego.
Ịchọrọ iwepụta pipeline 30-50% karịa n'ime ụbọchị 90?
Tags: omume ndị ahịaahụmahụ ahịanjirimara ndị ahịanjem ndị ahịanyocha njem ndị ahịanyocha ndị ahịa njemuru nyocha ndị njem ahịaahịa njem nkewacxchọrọ ọgbọchoo ahia ahiaihe ọchịnyocha ọtụtụ ọwannweta egokedu ihe nyocha njem ndị ahịa